नेपालका यी राजालाई सुन्दरी देख्नै नहुने, अर्कैकी श्रीमती उठाएर हिडेपछि भएको थियो बबाल — Imandarmedia.com
नेपालका यी राजालाई सुन्दरी देख्नै नहुने, अर्कैकी श्रीमती उठाएर हिडेपछि भएको थियो बबाल
नेपालबाट राजतन्त्र हट्यो तर राजतन्त्रको इतिहास हटाउन सकिँदैन । नेपाल आज जे जस्तो छ त्यसको जस र अपजसको ठूलो हिस्सा राजतन्त्र र त्यसमा पनि खाशखाश राजाहरुलाई जान्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नथालेको भए बाइसे चौबिसे राज्यमा विभक्त नेपाल आजकै स्थितिमा रहन्थ्यो वा अंग्रेजको उपनिवेश हुँदै अर्कै हुन्थ्यो ?
नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको यो असाधारण प्रश्नको उत्तर सहज छैन ।पृथ्वीनारायण शाह पछाडिका उत्तराधिकारी अनेक थरी आए । रणबहादुर शाहको पालामा राजपरम्परा नै उल्टियो । पशुपति दर्शनमा आएकी एक सुन्दरीमा राजा रणबहादुरको आँखा पर्यो । ति विधवा थिइन् । रणबहादुरको दरबारमा बैधानिक श्रीमती पनि थिइन् ।
रणबहादुरको रहरका लागि कस्को के लाग्थ्यो र ? विधवा उठाएर हिंडिदिए । सुन्दरीको सर्त कडा थियोः ल्याइते नै किन नहुन्, उनैबाट जन्मिएको छोरालाई राजा बनाउनु पर्ने ! भयो पनि त्यस्तै ।दरबारभित्रको शक्ति हानथापमा दरबार नराम्रोसँग गिजोलियो । बाहिरियाको चलखेलमा राजपरिवार पर्दै गयो । फलतः जंगबहादुरको उदय भयो, दरबार खोपीमा सीमित पारियो ।
राजा त्रिभुवनको पालामा देश राणा शासनबाट मुक्त भयो । तर, विदेशी प्रभावबाट राजपरिवार लिप्त भइसकेको थियो । त्रिभुवन भारतीय सल्लाहकारको घेराबन्दीमा थिए ।त्रिभुवनका छोरा महेन्द्र चतुर राजाका रुपमा चिनिन्छन् । बामे सर्दै गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि उनले बाघचाल नचलेको भए देशको मुहार उहिलै परिवर्तन हुन्थ्यो भन्ने एकथरी तर्क छ ।
अर्कोथरी महेन्द्रको तारिफ गर्छन र भन्छन्ः महेन्द्रले विकासको काँचुली फेरे, देशलाई स्वाधीन बनाउने एतिहासिक काम गरे । राजा महेन्द्रको युवावयमै निधन नभएको भए देशको अवश्था र व्यवश्थामा काफी अन्तर हुन्थ्यो भन्ने तर्कमा दम देखिन्छ ।राजा विरेन्द्र शालिन स्वभावका थिए । उनको पालामा फेरि दरबारभित्र शक्ति संघर्ष मडारिन थाल्यो । जनआन्दोन पनि भयो ।
देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रत्यक्ष शासनबाट बिमुख भएको दरबार र सिंहदरबारका बीचमा छेडखानी दोहोरिरहन्थ्यो । दरबारभित्र युवराजको विहेको विषय महाभारत बनिदियो । दरबार हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको बंशनाश भयो । प्रेमिकासँग विहे गर्न नपाएकै झोकमा दिपेन्द्रले आफूसमेत मारिने गरि गोली चलाएको बताइन्छ ।
दिपेन्द्रलाई उनकै प्रेमी देवियानीसँग बिहे गर्न दिएको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न सदाका लागि अनुत्तरित रह्यो ।त्यसपछि राजगद्दीमा विरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र आए । त्यसको केही समयमै राजतन्त्र हट्यो । (नेपाल आज)
जाडोमा आफ्नो छाला कसरी जोगाउने ? थाहा पाउनुहोस् यस्तो छ उपाय
मन मष्तिस्क हल्लाइदिने दीपावलीको एउटा तस्बिर
मिठो फलभित्र भेटियो अचम्मको बस्तु, मन्त्रीले भने- ‘जघन्य अपराध’ भो
यौन सपना देख्नुको रहस्य केहो ? बेलैमा सोच्नुहोस यस्तो हुनसक्छ कारण